ကျစ်လစ်သော ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ကျစ်လစ်သော ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-M စီးရီး ကျစ်လစ်သော ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် အသုံးချ တွင် ထိန်းချုပ်မှုlတွင်g အမျိုးမျိုးသော အဆို့ရှင် နှင့် အခြား တူသော ထုတ်ကုန်, တွင်clude လိပ်ပြာ အဆို့ရှင်, အလုံး အဆို့ရှင်, ဂိတ် အဆို့ရှင်, ထိန်းချုပ်မှု အခင်အရှင် နှင့် etc.It ကျယ်ပြန့် သက်ဆိုင် သို့ ရေနံ, ဓာတု, ရေ ကုသမှု, shippတွင်g, စက္ကူ mတစ်ဦးkတွင်g, စွမ်းအား စက်ရုံ, heတစ်ဦးtတွင်g, အလင်း တွင်dustry နှင့် အခြား တွင်dustries. AOX-M စီးရီး ကျစ်လစ်သော ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r များမှာ သငျ့လျြောသော ဘို့ တစ်ဦး ကျယ်ဝန်းသော rတစ်ဦးnge ၏ hတစ်ဦးrsh တွင်dustriတစ်ဦးl တစ်ဦးpplicတစ်ဦးtions, နှင့် မြင့်သော positionတွင်g တစ်ဦးccurတစ်ဦးcy နှင့် ကျစ်လစ်သော construction.We မျှော်လင့်ထား သို့ ဖြစ် သင့်ရဲ့ ရှည်လျားသော သက်တမ်း pတစ်ဦးrtner တွင် Chတွင်တစ်ဦး.
ပြည်တွင်းထိန်းချုပ်မှု inching / အော်တိုကျင်းပနိုင်ရန်ရွေးချယ်ရေး
တိကျစွာ machine ဂီယာစနစ်အား & ရေနံချောဆီအရည်ကြည်
AOX-M စီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းပေါင်းစုံ၏ setting ကိုနှင့်ရောဂါရှာဖွေလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်အိမ်ရာဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိဘဲ, display screen သို့ပိတျထားသောမှတဆင့်လုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ setting ကို tools များနှင့် display ကိုမျက်နှာပြင်အကြားတရားဝင်အကွာအဝေး 1-1.5m အကြောင်းပါ။
2. Valve mounting စံ
AOX-M စီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းပေါင်းစုံအလှည့်လျှပ်စစ် actuator ၏ installation အနားကွပ်မာခ် ISO5210 သို့မဟုတ် DIN3210 စံနှင့်ညီသည်။ အဆို့ရှင်၏အမျိုးမျိုးများအတွက်သင့်လျော်သောရွေးချယ်ဖို့ output ကို drive ကိုအမျိုးအစားအမျိုးမျိုး။
AOX-M စီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းပေါင်းစုံများအတွက် 3. မော်တော်ကာကွယ်မှုလျှပ်စစ် actuator လှည့်။
အပူဆန့်ကျင်မော်တာကိုကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ, သုံးအဆင့်မော်တာသို့မဟုတ်အတွင်းအကွေ့အကောက်များသော Single-အဆင့်မော်တာတပ်ဆင်အပူ switch ရဲ့နှစ်ခုစီးရီးရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပူအကွေ့အကောက်များသော၏မော်တာမှထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်ထိန်းချုပ်မှုဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ AOX-M စီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn အထူးသဖြင့်နည်းပညာသုတေသနနှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရန်ပုံငွေပမာဏကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။3တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်, 27 utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်, 49 ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်များနှင့်4တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်အပါအဝင်စုစုပေါင်း 89 မူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။2utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို IS09001, ISO14001, အီး, ATEX, gost, EAC, SIL3, IP68, Cu-TR, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ရရှိသောအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အပြည့်အဝကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းပြသရာဖြစ်ပါတယ် နှင့် AOX-M စီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းပေါင်းစုံ၏အရည်အသွေးလျှပ်စစ် actuator လှည့်။
မေး: ဘယ်လောက်ကြာငါ AOX-M စီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းပေါင်းစုံ၏နမူနာလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သလဲ
မေး: ဘယ်လို AOX-M စီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းပေါင်းစုံဆိုကျေးဇူးတင်လွှာသွင်းကုန်၏မပါဘဲလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်အမိန့်ပေးနိုင်သနည်း
hot Tags:: ကျစ်လစ်သော ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်